စီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ပီဆိုရင် ERP(Enterprise Resource Planning) ဆိုတာဘာလဲသိဖို့လိုလာပါပီ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နဲ့အသေးဆုံး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေက အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အဲဒီလုပ်ငန...
Human Resource Management System (HRMS) Organization တစ်ခု ဖြစ်လာပြီ ဆိုတာနဲ့ မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ မဖြစ်မနေအသုံးပြုရမယ့် System တွေလည်း လိုအပ်လာပါပြီ။ ဆိုတော့ ဘယ် System တွေက မိမိတို့ ...
လူကြီးမင်းတို့ Events များတွင် ပွဲအစမှအဆုံးတိုင် အစီစဉ်ကျဖို့အတွက် ဘာတွေလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ ? လူကြီးမင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ Business Partner တွေ အစရှိသဖြင့် ဖိတ်ကြားလွှာတွေ ဖိတ်တယ်၊ ပွဲမှာ ဘယ်သူတ...
GPS ( Global Positioning System ) ကို အားလုံး ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ GPS software ကို ဘာကြောင့် သုံးကြသလဲ ??? . . . Okay , GPS vehicle Tracking System ( Global Positioning System  in My...
Event Marketing Automation ကိုအသုံးပြုပြီး ပြည့်စုံအောင်မြင်တဲ့ပွဲတစ်ခု ဖန်တီးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးပြီလား။ GEVME  တွင် မည်သည့် device အမျိုးအစားနှင့်မဆို ကြည့်ရှုရလွယ်ကူသော Email Campaign များ...
Global Connect Asia ERP Myanmar Odoo  ၏ Accounting Module အကြောင်းကို အနည်းငယ်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသည်။ Finance Accounting သို့မဟုတ် Financial Accountancy ဆိုသည်မှာ Accountingနှင့် သက်ဆိုင်သော Financi...
Human Resource Management System ဆိုတာ မည်သည့် organization အတွက်ကိုမဆို လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့ မဖြစ်မနေအသုံးပြုသင့်သော System တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိ organization အတွက် human resource တွေကို သင့်လျော်သေ...
GPS ဆိုတာကတော့ Global Positioning System ကိုအတိုကောက်ခေါ်တဲ့ နာမည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Orbiting Satellite လို့ခေါ်ပြီး ကမ္ဘာပတ်လမ်းကြောင်းထဲကိုလွှတ်တင်ထားတဲ့ ဂြိုလ်တု ကွန်ယက်တွေရဲ့ အချက်အလက်တွေကို အသုံးပြု...
BENEFITS OF ODOO CRM Odoo  CRM ၏ အကျိုးရလာဒ်များ • Fully integrated with other apps အခြား app များနှင့် တွဲ၍ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း။ • Flexible to all businesses မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်မဆို သင...
CRM (Customer Relationship Management) System အသုံးပြု၍ သည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာများ စီမံခန့်ခွဲ ခြင်း။ Customer Relationship Management သည်ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမ...
Start writin Latmat.com.mm (Online Event Ticketing Platform) ကိုအသုံးပြု၍ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခြင်း။ အောင်မြင်တဲ့ ပွဲတစ်ခုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက် Event စီစဉ်သူတွေအနေနဲ့ မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖ...
ERP ဆိုတာကတော့ Enterprise Resource Planning System  ပါ။ SAP, Sage, Microsoft Dynamics, NETSUITE, Odoo စတဲ့ လူသုံးများတဲ့ ERP Solution တွေရှိပါတယ်။ ယခုမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ Odoo  ERP ပဲဖြစ်ပ...